Michael Ballack oo shaaca ka qaaday sababta u diiday inuu u dhaqaaqo kooxda Barcelona – Gool FM
(Germany) 29 Mar 2020. Halyeeyga xulka qaranka Germany iyo kooxda Bayern Munich ee Michael Ballack ayaa qiray inuu ku dhawaaday sanado kahor inuu ku ciyaaro maaliyadaha kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, kahor inta aan lagu guuldarreysan wadahadalada.
Intii lagu gudi jiray wareysi uu siiyay shabakada “Sky Sports” halyeeyga xulka qaranka Germany iyo kooxda Bayern Munich ee Michael Ballack ayaa wuxuu yiri:
“Waqtigeygii waan ku raaxeystay koox kasta oo aan u ciyaaray, waligeyna dib ma eegin, in kastoo ay jireen xulashooyin kale oo badan.”
Xiddigii hore ee kubadda cagta Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday inuu dalab ka helay Barcelona 2004-tii, wuxuuna yiri:
“Waxaan qarka u saarnaa inaan u wareego, sababtoo ah waxaan wada gaarnay heshiis, kaddib markii ay wada hadleen mas’uuliyiinta labada kooxood, laakiin qiimaha heshiiska ayaa istaagay kaddib markii leysku fahmi waayey”.
“Intii lagu jiray mudadaas, waxaan galay wada hadalo badan, haddii ay ahaan laheyd wada hadaladaas iyo xitaa waxyaabaha aan si wanaagsan ugu socon kooxda.”
“Tusaale ahaan waxaan ka hadleynay dhisida kooxda iyo sida ay kaga fiicnaan laheyd sidii hore oo ay u noqon laheyd mid awood badan, gaar ahaan inaan u tartano hanashada tartanka Champions League.”
Si kastaba ha noqtee, Michael Ballack ayaa xirnaa maaliyada kooxda Bayern Munich inta u dhaxeysay 2002 ilaa iyo 2006, kaddib markii uu kaga soo biiray isla naadiga reer Germany ee Bayer Leverkusen.
Michael Ballack ayaa wuxuu sidoo kale qiray suurtagalnimada uu ugu biiri lahaa kooxda Real Madrid sanadkii 2002, si la mid ah Barcelona 2004, wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin labada koox ee ugu fiican Yurub.
“Dabcan tani waxay ahayd mid xiiso leh waayihii hore, waxaana jeclaan lahaa inaan tijaabiyo qibradaas, si aan ugu ciyaaro kooxahan oo kale”.